Eargaya Midowga Afrika ee Soomaaliya oo ka hadlay howlaha Amisom & xil ka qaadistii Afhayeen Xumud – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Eargaya Midowga Afrika ee Soomaaliya oo ka hadlay howlaha Amisom & xil ka qaadistii Afhayeen Xumud
Mareeg.com: Ergayga Midowga Africa u qaabilsan Soomaaliya Danjire Maman S. Sidikou oo shir jaraa’id ku qabtay saldhigga ugu weyn AMISOM ee Xalane ayaa waxa uu uga hadlay qorshyaasha howlgalka AMISOM iyo guulaha nabad ilaalinta laga gaaray sanadkii la soo dhaafay ee 2014.
Danjire Sidikou ayaa sheegay in AMISOM ay qorsheyneyso dhameystirka howlgalka guud ahaan Alshabaab la doonayo in looga saaro gobollada Soomaaliya.
Wakiilka gaarka ee Midowga Africa ee Soomaaliya aya tilmaamay in howlgalka Midowga Africa ee Soomaaliya uu sii wadi doono taageerada Soomaaliya iyo xoojinta ciidamada xoogga dalka si ay u qaataan mas’uuliyidooda xilliga loo baahdo in guud ahaan amaanka dalka ay la wareegaan.
Mar uu ka hadlayay guulihii ay si wada jir ah u gaareen ciidamada Midowga Africa iyo xoogga dalka Soomaaliya ayuu Maman S. Sidikou uu sheegay in howlgalkii Gallareyr lagu Alshabaab looga saaray ilaa 10 magaalo.
Danjire Maman Sadiku ayaa sheegay in howlgalkii Badweynta India Al-Shabaab looga saaray ilaa 8 magaalo oo ay ku jirto magaalada Baraawe, Saldhigii ugu weynaa ee Al-Shabaab ay ka soo abaabuli jirtay weeraradooda.
Danjiraha Midowga Africa ayaa sheegay in Midowga Africa ay rejenayaan in dowladda Soomaaliya ay horumar ka gaarto dhinaca siyaasadda dalka iyo in hiigsiga 2016-ka oo ay meel mariso, waxa uuna Baarlamaanka ka rejeyay meel marinta sharciyada aas aasiga ah u ah hiigsiga 2016-ka.
Dhanka kale, Wakiilka gaar ah Ee Midowga Africa u qaabilsan Soomaaliya oo maanta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xilkii laga qaaday afhayeenka AMISOM Cali Aadan Xumad,isagoona meesha ka saaray inaan xilka looga qaadin Afhayeenka weerarkii dhawaan lagu qaaday xarunta Taliska ugu weyn AMISOM ee magaalada Muqdisho.
Danjire, Mamadu Siduku ayaa Xusay in Afhayeen Xumud uu waqtigiisu ku ekaa Dhamaadkii Sanadkii tagay ee 2014-ka.
Cali Aadan Xumud ayaa Xilka Afhayeenimo ee AMISOM waxaa loo magacaabay sanadkii 2012.iyadoona Taliska AMISOM ay shaaciyeen in Xilkaasi laga qaaday, inkastoo Xumud uu sheegay in aan lagu wargalin Xilka qaadista lagu sameeyay.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayip Erdogan oo booqashadii labaad ku imaanaya Soomaaliya
Qof naftiis hure ah oo isku qarxiyey kolonyo ka tirsan ciidamada Gaashaan